Dagaal Ooge Liibiyaan ah oo magaalada Misraatah lameel dhigay Kacbada!
0 Tuesday June 16, 2020 - 06:46:53
Hoggaamiye katirsan maleeshiyaadka dagaal Ooge Khaliifa Xaftar ayaa sheegay in dagaalka ay uga jiraan wadanka Liibiya uu yahay mid caqiiqdo ah ayna difaacayaan wax uu ugu yeeray dhul barakaysan.
Ciidamo la sheegay in Farmaajo u adeegsan doono xil kororsi oo Muqdisho gaaray.
0 Tuesday June 16, 2020 - 06:29:12
Xukuumadda Kheyre ayaa bilaawday in ay si qarsoodi ah magaalada Muqdisho ugusoo daad gurayso maleeshiyaad bilo ka hor tababar loogu qaaday dalka Eritrea ee dhaca bariga qaaradda Afrika.
10 Askari Itoobiyaan ah oo ku dhintay Weeraro lagula beegsaday deegaanka Qansax Oomane.
0 Monday June 15, 2020 - 17:09:49
Khasaara lixaad leh ayaa ciidamada Xabashida Itoobiya kasoo gaaray weeraro xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay lagula beegsaday deegaanno katirsan gobolka Baay ee dhaca Koonfurta Soomaaliya.
0 Monday June 15, 2020 - 17:06:49
Wadahadallada Somaliland iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay ka furmeen dalka Jabbuuti, waxaase isweydiin leh maxay kaga duwanyihiin wada hadalladii faraha badnaa ee hore loo bilaabay.
Askari lagu dilay duleedka Muqdisho iyo saldhigga AMISOM ee Balcad oo weerar lakulmay.
0 Monday June 15, 2020 - 09:10:42
Wararka ka imaanaya duleedyada galbeed iyo waqooyi ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in weerar khasaara dhaliyay lagu qaaday ciidamo katirsanaa dowladda Federaalka iyo kuwa AMISOM.
0 Monday June 15, 2020 - 08:48:02
Daawo Video: Aqoonyahan u istaagay in uu uhiiliyo Afka Soomaaliga ee ladayacay.
0 Monday June 15, 2020 - 07:17:43
Bilaawgii todobaatameeyadii ayay dowladdii Max'med Siyaad Barre qaadday Olole ballaaran oo shacabka Soomaaliyeed lagu barayay Afkooda, ololahaas ayaa loogu magac daray Ololaha Horumarinta reer Miyiga.
0 Monday June 15, 2020 - 06:39:59
Maamulka 'Somaliland' oo ku dhawaaqay in uu fashilmay shirkii Jabuuti ka dhacay.
0 Monday June 15, 2020 - 05:57:49
Waxaa fashil iyo guuldarro kusoo idlaaday shir wadanka Jabuuti uga furmay maamullada 'Somaliland' iyo dowladda Federaalka oo labaduba dabadhilifyo u ah Itoobiya iyo reergalbeedka.
Al Shabaab oo Weerar askar lagu dilay ka fuliyay gobolka Mandheera.
0 Sunday June 14, 2020 - 16:23:51
Wararka ka imaanaya gobolka Mandheera ee dhulka Soomaalida NFD waxay sheegayaan in xoogag katirsan Al Shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaalla tuulo hoos timaada gobolkaas.
Faysal Cali Waraabe oo raja xumo ka muujiyay wadahadalka udhaxeeyo Farmaajo iyo Muuse Buuxi.
0 Sunday June 14, 2020 - 16:19:18
Wadanka Jabuuti waxaa laysugu geeyay Farmaajo iyo Muuse Biixi oo kala hoggaamiyo laba maamul oo dabadhilifyo u ah Xabashida Itoobiya.
Xabaal Wadareedyo Boqolaal qof ku aasanyihiin oo laga helay wadanka Liibiya.
0 Sunday June 14, 2020 - 16:09:40
Wararka ka imaanaya Liibiya waxay sheegayaan in xabaal wadareedyo boqolaal qof ku aasanyihiin laga helay mid kamida xarumihii ugu waaweynaa ee xaftar uu ku lahaa galbeedka liibiya.
Warbixin: Qowmiyado Itoobiyaan ah oo lagu deegaamaynayo dhulka Soomaaligalbeed!
0 Sunday June 14, 2020 - 07:55:34
Dhulka gummeysiga Itoobiya ku jira ee Soomaaligalbeed waxaa ka socda deegaamaysi si xowlli ah ku socda oo ka dhan ah shacabka Soomaaliyeed ee dhulkoodi laboobay.
Dhageyso: Ciidamo ka goostay maamulka Axmed Madoobe oo iska dhiibay degmada Jilib.
0 Sunday June 14, 2020 - 07:52:34
Firxadka ciidamo katirsan maamulka isku magacaabay Jubbaland ayaa laga dareemayaa deegaanno katirsan Jubbooyinka oo ay ka jiraan maamullo islaami ah.
Carona Virus oo halaag daran ka geystay sedax kamid ah wadamada qaaradda America.
0 Sunday June 14, 2020 - 07:27:11
Wararka ka imaanaya dalka Baraaziil ayaa sheegaya in shalay oo kaliya ay Carona Virus udhinteen dad gaaraya 892 qof taas oo dhimashada guud ka dhigaysa 42,720 ruux.
Weeraro lagu qaaday saldhigyo Melleteri oo kuyaal Kulbiyoow iyo Sabiid.
0 Sunday June 14, 2020 - 07:25:36
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada hoose ayaa sheegaya in markale weerar lagu beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada gummeysiga dowladda Kenya.
Al Shabaab oo saraakiil ku dilay Muqdisho gaarina ka qaatay.
0 Sunday June 14, 2020 - 07:23:55
Faah faahin dheeri ah ayaa kasoo baxaysa dilal saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qaar kamid ah xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo lagu beegsaday saraakiil dowladda katirsan.
0 Saturday June 13, 2020 - 19:29:40
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay weerar hubaysan oo markale ay xoogag jihaadi ah ku qaadeen ciidamo ku sugnaa afaafka hore ee degmada Balcad gobolka Sh/dhexe.
Ismaaciil Cumar Geelle oo sheegay in uu heshiinayo Farmaajo iyo Muuse Biixi.
0 Saturday June 13, 2020 - 19:27:23
Dowladaha Jabuuti iyo Itoobiya ayaa ku dhawaaqay in ay wadahadal dib uheshiisiin ah dhax dhigayaan Max'med Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dowladda Federaalka iyo Muuse Biixi oo ah hoggaamiyaha maamulka 'Somaliland'.
Weerar lagu dilay askar katirsan maamulka 'Jubbaland' oo ka dhacay Jubbada Hoose.
0 Saturday June 13, 2020 - 09:43:30
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar hubaysan oo ka dhacay deegaan katirsan gobolka Jubbada Hoose.
Trump muxuu sameyn doonaa haddii looga guulaysto doorashooyinka dhici doona bisha Novembar?
0 Saturday June 13, 2020 - 09:22:51
Khilaafka dhanka siyaasadda ah ee kajira dalka Mareykanka ayaa sii xoogeysanaya xiili dibad baxyo rabshado wata ay wadankaas hareeyeen.
Qaraxyo gaadiid looga gubay ciidamada Itoobiya oo ka dhacay deegaanka Yurkud.
0 Saturday June 13, 2020 - 08:09:43
Dagaalyahanada Al Shabaab ayaa markale weeraro ku qaaday ciidamada Xabashida Itoobiya ee kusii qulqulaya magaalada Baydhabo ee gobolka Baay.
Xukunno dilal,gacan goyn iyo Karbaash ah oo ka dhacay Kurtun Waareey iyo Ruun nirgood
0 Saturday June 13, 2020 - 07:59:57
Fagaarayaal kuyaal degmooyin dhaca gobollada Shabeelaha dhexe iyo Shabeelaha hoose waxaa shalay ka dhacay xukunno lagu fuliyay dad dambiyo kala duwan galay.
Mareykanka oo muwaadiniintiisa uga digay in ay usafraan Jabuuti.
0 Saturday June 13, 2020 - 06:33:09
War qoraal ah oo kasoo baxay safaaradda Mareykanka ee dalka Jabuuti ayaa digniin loogu jeediyay muwaadiniinta American-ka ah ee ku sugan mid kamida wadamada bariga Afrika.
0 Friday June 12, 2020 - 07:19:44
Mujalada lagu magacaabo National Interest ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa soo daabacday warbixin ay cinwaan uga dhigtay "Al-Qaacida oo dib usoo xoogeysatay iyo Mareykanka oo dafiraya qatartooda" taas oo ay ku faaqideyso hormarada xagga dagaalka ee ay xaqiijiyeen faracyada Al-Qaacida lixdii…
Labo Booyado Oo Dowladda Federaalka Looga Gubay Duleedka Afgooye.
0 Friday June 12, 2020 - 07:17:00
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku waramaya in qaraxyo xoogan lala eegtay kolonyo katirsan ciidamada Dowladda federaalka oo ku socdaalayay duleedka degmada Afgooye ee gobolkaas.
Gudoomiyaha Xudur oo Sheegay in Kontomeeyo Askari looga dilay dagaalkii ka dhacay gobolka Bakool [Wareysi gaar ah].
0 Thursday June 11, 2020 - 16:17:32
Maxamad Macallin Axmad oo ah gudoomiyaha magaalada Xudur ee gobolka Bakool ee maamulka Koonfur galbeed ayaa waraysi uu siiyay Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan.
Carona oo kumanaan qof ku dilay Mareykanka iyo Booliska oo nin madoow ah ku khaarijiyay Washington.
0 Thursday June 11, 2020 - 14:05:11
Boqolaal qof American ah ayaa markale cudurka halista ah ee Carona Virus ugu dhintay gudaha wadanka Mareykanka xilli caabuqan uu si xowlli ah ugu faafayo 50-ka gobol ee wadankaasi ka koobanyahay.
Shirkada Buruuj oo si sharci ah ku yeelatay dhul lagu qabsaday oo ku yaala deegaanka Jaziira.
0 Thursday June 11, 2020 - 12:59:13
Kulan lagu soo gabagabeenayay muran ka taagnaa dhul cabirkiisu yahay 2000*400M oo kuyaala deegaanka jaziira gaar ahaan xaafada geeda fuul oo u dhaw Saldhiga Turkiga ayaa waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka Somalia.
Q.Midoobay oo DF ku amartay in doorashooyinka ay qabato waqtigii loogu talagalay.
0 Thursday June 11, 2020 - 10:16:05
Waxa loogu yeero beesha calamka ayaa sare uqaadday cadaadiska siyaasadeed ee ay saarayaan hoggaanka dowladda Federaalka Soomaaliya oo ku eedaysan xil kororsi.
Iska hor'imaadyo culus oo ka dhacay degmada Ceelwaaq.
0 Thursday June 11, 2020 - 09:59:15
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in markale ay dagaallo culus ka dhaceen degmo ay xoog ku haystaan ciidamada gummeysiga Kenya.
Video: Itoobiya oo ku goodisay in ay dhammaystirayso biya xireenka Wabiga Niil.
0 Thursday June 11, 2020 - 09:26:15
Dowladda xabashida itoobiya ayaa markale ku dhawaaqday in ay dedejinayso dhimsha biya xireenka Alnahda oo haddii lamaystiro noqon doono midka koowaad ee ugu qaaradda afrika iyo biya xireenka 10aad ee ugu weyn caalamka.
Weerar Askar lagu dilay oo ka dhacay deegaanka Warmaxan.
0 Wednesday June 10, 2020 - 16:57:31
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar dhabbagal ah oo ciidamo katirsan dowladda Federaalka lagula beegsaday deegaan katirsan gobolka Sh/hoose.
AMISOM oo qiratay waxyar oo kamid ah Xasuuq ay ka geysatay Sh/Hoose.
0 Wednesday June 10, 2020 - 16:55:48
Qiraal mar la arag ayaa kasoo baxay taliska guud ee ciidamada shisheeyaha AMISOM kaas oo ku aaddan xasuuq ay maalmo ka hor ka geysteen deegaan katirsan Sh/hoose.
0 Wednesday June 10, 2020 - 14:09:27
Dagaallo culus ayaa wali ka socda bariga iyo bartamaha wadanka Liibiya kuwaas oo udhaxeeya maleeshiyaad kala taabacsan dhinacyada awoodda wanka ku loolamaya ee dowladaha shisheeye ay gadaal uga daabanyihiin.
« Prev1234567 ... 353Next »
Hay'adda HRW oo Mareykanka ku eedaysay in uu shacab Rayid ah ku dilay duqeymo ka dhacay Soomaaliya [Warbixin].
16/06/2020 - 13:13:19
16/06/2020 - 12:03:40